Eden Hazard: Ciyaaryahanka cusub ee Real Madrid oo la horkeenay taageerayaasha kooxdaasi ah - BBC News Somali
Eden Hazard: Ciyaaryahanka cusub ee Real Madrid oo la horkeenay taageerayaasha kooxdaasi ah
Eden Hazard ayaa sheegay inuusan "ahayn Galactico, hasayeeshee uu isku dayi doono inuu noqdo" xilli si rasmi ah ay kooxda Real Madrid ciyaaryahankan ay u horkeentay 50,000 oo taageerayaal ah oo ku sugnaa garoonka Bernabeu.
Weerraryahankan reer Belgium ee 28 jirka ah ayaa todobaadkii tegay kooxda Real Madrid uga soo biiray kooxda Chelsea lacag la sheegay inay kor u dhaafayso £150m.
Hazard ayaa maray baaritaan caafimaad kaddibna waxa uu saxiixay qandaraas shan sanadood ah isagoo uu garab taagan yahay gudoomiyaha kooxdaasi Florentino Perez.
"Tan iyo markii aan carruurta ahaa waxaan ku riyoon jiray inaan Real Madrid u ciyaaro."
Markii uu qandaraaskiisa saxiixay, ayuu Perez waxa uu Hazard u soo bandhigay taageerayaasha, kaddibna waxa uu bilowgiiba ku hadlay kalmado af Spanish ah isagoo leh: "Hola todos" (Iska warrama), kaddibna khudbaddiisa waxa uu ku jeediyay af Faransiis.
Image caption Hazard kubad ku hor laadaya taageerayaasha Real Madrid
Kaddib waxa uu xirtay faananadda Real Madrid garoonka ayuuna soo galay isagoo laadaya kubad midabkeedu isugu jiro caddaan iyo dahabi sidoo kalana dhunkanaya astaanta kooxda.
Markii dambe ayuu shir jaraa'id ka sheegay inuu "doonayo inuu iskudayo inuu noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan caalamka hasayeeshee marka hore uu doonayay inuu ka mid noqdo kooxda ugu wanaagsan caalamka."
"Anigu ma aan ihi Galactico, hasayeeshee uu isku dayi doono inuu noqdo, haatan waxaan ahay Eden Hazard."
Image caption Eden Hazard qoyskiisa iyo gudoomiyaha Real Madrid